“Mwari Anoda Munhu Anopa Achifara” | Swedera Pedyo naMwari
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Luo Malagasy Maltese Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Chipo cherudzii chingaita kuti unyatsofara? Hapana mubvunzo kuti vakawanda vedu vangafara kugamuchira chipo kubva kumunhu anopa pamusana perudo pane kungoita zvekumanikidzirwa. Chinoita kuti munhu ape ndicho chinonyanya kukosha. Chinokoshawo kwatiri. Uyewo chinonyanya kukosha kuna Mwari. Funga nezvemashoko akafuridzirwa emuapostora Pauro ari pana 2 VaKorinde 9:7.
Nei Pauro akanyora mashoko iwayo? Aida kukurudzira vaKristu vokuKorinde kuti vatsigire basa rokuyamura vavainamata navo vokuJudhiya vaida kubatsirwa. Akaedza kumanikidza vaKorinde kuti vape here? Kwete, asi akanyora kuti: “Mumwe nomumwe ngaaite sezvaakasarudza kuita mumwoyo make, asinganyunyuti kana achigombedzerwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara.” Ngatimbonyatsoongorora zano iroro.
“Sezvaakasarudza kuita mumwoyo make.” Pauro anoti muKristu wechokwadi anopa nokuti anenge asarudza kuita kudaro “mumwoyo make.” MuKristu anonyatsofungawo zvinodiwa nevaanonamata navo. Imwe nyanzvi inoti shoko rakashandurwa kuti “zvaakasarudza” mumutauro wakashandiswa pakunyora Bhaibheri pakutanga “rine pfungwa yokufanoronga kana kuti kufanofunga.” Saka muKristu anofungisisa zvinodiwa nevaanonamata navo uye anozvibvunza kuti angavabatsira sei.—1 Johani 3:17.
“Asinganyunyuti kana achigombedzerwa.” Pauro anotaura zvinhu zviviri zvinofanira kudziviswa nevaKristu vechokwadi pavanenge vachipa zvinoti, kupa usingadi uye uchigombedzerwa. Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “kunyunyuta” rinoreva kupa “usingafari.” Rimwe duramazwi reBhaibheri rinoti munhu anopa asingadi anopa “mwoyo wake uchirwadza kuti ava kurasikirwa nemari yake.” Munhu anopa achiita zvekugombedzerwa anopa nekuti anenge amanikidzwa. Ndiani wedu anoda kupiwa chipo nemunhu anenge asingadi kana kuti anenge amanikidzwa?
“Mwari anoda munhu anopa achifara.” Pauro anoti kana muKristu asarudza kupa, anofanira kupa achifara. Zvechokwadi, kupa nechinangwa chakanaka kunoita kuti tifare. (Mabasa 20:35) Mufaro wemunhu anopa achifara unonyatsoonekwa nevamwe. Shoko rokuti “kufara” rinogona kureva manzwiro anoita munhu nechomukati uye kufara kwaanoratidza nechokunze paanopa. Tinobayiwa mwoyo mumwe munhu paanotipa achifara. Anofadzawo mwoyo waMwari. Imwe shanduro inoti: “Mwari anoda vanhu vanoda kupa.”—Contemporary English Version.
“Mwari anoda vanhu vanoda kupa”
Mashoko akafuridzirwa emuapostora Pauro anodzidzisa vaKristu kuti vangapa sei. Tingava tichipa nguva yedu, simba, kana zvinhu zvedu, ngatipe tichida nekuti tinowana mufaro wechokwadi nokupa vamwe, kunyanya vaya vanoda kubatsirwa. Kupa kwakadaro kuchaita kuti tifare uye kuchaita kuti tifarirwe naMwari, nekuti “anoda munhu anopa achifara.”
Ndima dzeBhaibheri Dzamunogona Kuverenga Muna September
1 na2 VaKorinde